MAAD: Sky Sports PL, Jordan Henderson Iyo James Milner Oo Hogaaminaya Xidigo Si Waali Ah Ugu Maadsaday Harry Kane, Kadib Goolkii Mohamed Salah Iyo Abaartii Kane Ee Wembley. – GOOL24.NET
MAAD: Sky Sports PL, Jordan Henderson Iyo James Milner Oo Hogaaminaya Xidigo Si Waali Ah Ugu Maadsaday Harry Kane, Kadib Goolkii Mohamed Salah Iyo Abaartii Kane Ee Wembley.
Xidiga xulka qaranka England iyo kooxda Tottenham ee Harry Kane ayaa qaadanaya waqti aad u adag oo loogu maadsanayo qaabkii lama filaanka ahaa ee Harry Kane uu ugu dhaartay in uu lahaa goolkii Eriksen loo qoray kulankii Stoke City laakiin markii uu Mohamed Salah gool ka dhaliyay kulankii Bournemouth ayaa qaar ka mid ah ciyaartoyda Reds bilaabeen in ay Harry Kane si xun dhulka u jiidaan.
Laakii Harry Kane oo culays xoogan ka dareemayay duufaantii uu aduunka kaga kiciyay goolkii uu sheegashada dhaarta ah ku helay ayaa ku fashilmay in uu kooxdiisa Tottenham wax goolal ah udhaliyo kulankii Man City ay guuldarada wayn soo baday Spurs.
James Milner ayaa markii ay ciyaartu soo dhamaatayba bilaabay in uu dhulka jiido Harry Kane isaga oo bartiisa twitterka ee uu dhawaan ku soo biiray ku soo qoray: ” Saddexley kale oo uu maanta dhaliyay Mo… kaliya waxaan sugayaa inta guddida sheegashooyinku labada kale cadaynayaan”.
Milner ayaa si wayn Harry Kane dhulka ugu jiiday sheegashada goolkii Eriksen wuxuuna ku dooday in saddexdii gool ee ay kooxdiisa Liverpool ka dhalisay Bournemouth ay ahaayeen saddexley uu Mohamed Salah dhaliyay isla markaana uu usagayo inta Salah loo xaqiijinayo labada gool ee kale ee ay ciyaartoyda kooxdiisa Firmino iyo Mane dhaliyeen si la mid ah qaabkii Harry Kane!.
Laakiin barta rasmiga ah ee Sky Sports u qoondeeyay Premier League ee Sky Sports PL ayaa Harry Kane calool xumo ku sii abuurtay waxaana sawirka hoose la soo raaciyay qoraalka lagu sheegay in waqtigii nasashada ay Man City 2-1 hogaanka ku haysay iyada oo qalin lagu masaxay magaca Harry Kane waxaana la sii raaciyay in Christian Eriksen uu dhaliyay goolka Tottenham wax yar ka hor waqtigii nasashada iyada oo arintan lagu muujiiyay in markan aanu Harry Kane sheegan karin goolka Christian Eriksen.
Laakiin kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa markiisa ku maadsaday Harry Kane isaga oo sida aad ka arki karto muuqaalka hoose si maad ah u sheegay in Mohamed Salah uu wada sheegan doono saddexdii gool ee ay kooxdiisu ka dhalisay Bournemouth.
Markii Henderson wax laga waydiiyay bandhiga Mohamed Salah iyo in uu dhaliyay goolkiisii 40 aad ee tartamada oo dhan iyo goolkiisii 30 aad ee Premier League ayuu Henderson oo qoslayaa yidhi: “Isagu waxa uu ii sheegay in uu sheegan doono dhamaantood(saddexda goolba)”. Waxayna noqotay wax aad loogu qoslay.
Laakiin Henderson oo si saxah markan u hadlaya ayaa yidhi: “Mo Salah cajiib ayuu ahaa, kaliya waxa uu sii wataa in uu sii socdo. Heerka shaqadiisa anaga waxa uu noo yahay ciyaartoy wayn, waxaan rajaynayaa in uu noo sii wadi doono gool dhalinta, waxa uu sii wadi karaa in uu Harry Kane ka ilaaliyo oo uu ku guulaysto kabta dahabka ah”.
Halkan Ka Daawo muuqalka Henderson oo BT Sport La Hadlayay:
“He told me he’s going to claim all of them!” 🤣
Jordan Henderson raves about Mohamed Salah…and can’t resist a joke with @HKane 👏
🎙 @DesKellyBTS pic.twitter.com/Y63zWKDFhH
Ma aha James Milner, Henderson ama Sky Sports PL oo kaliya balse taageerayaasha kubbada cagta ayaa dhulka jiid-jiiday Harry Kane markii uu gool la’aan ka baxay Wembley Stadium isla markaana uu Mohamed Salah soo ceshaday goolkii ay Kane ku abaal mariyeen guddida Preier league ee sheegashooyinka goolashu.